Vaovao - Ny fanadihadiana sy fampirantiana momba ny akademika momba an'i Beijing faha-19
Ny tatitra sy fampirantiana momba ny akademika faha-19 any Beijing
Huiyu fluid dia nanatrika ny BCEIA2019 ary hanatrika ny BCEIA2021 any Beijing. . Tsidiho ny trano heva an'i Huiyu, 6A011 #, raha te hahalala momba ny paompy Peristaltika fampiasa avo lenta an'ny orinasa amin'ny fitsaboana rano, laboratoara, fikarohana siantifika ary fampiharana.
Ho fanampin'izay, tongava mitsidika ny tranoheva misy anay mba hahazoana antsipiriany bebe kokoa. Izahay dia hanome anao ny topy maso ny fomba fiasan'ny santionany Huiyu ary hanazava ny fomba azo ampiharina amin'ny fampiharana mahazatra amin'ny fampiasana ireo fomba fanao tsara indrindra novolavolaina mifototra amin'ny zavatra niainan'ny orinasa.
Noho izany, mitsangantsangana mankany amin'ny booth # 6A011 ary manao veloma an'i huiyu!
Tohanan'ny CAIA (Fikambanana China ho an'ny Fanadihadiana Instrumental), ny Fihaonambe sy Fampirantiana momba ny Fitaovana Instrumental (BCEIA) any Beijing dia fihaonambe fampirantiana sy fampirantiana iraisam-pirenena iraisam-pirenena malaza any China. Taorian'ny nitazomana sy nivelarana nandritra ny 30 taona lasa, nanjary nalaza eran'izao tontolo izao ny BCEIA, miaraka amin'ireo mpiranty sy mpandray anjara avy amin'ny firenena 20 sy 30 mahery, handray anjara amin'ilay hetsika lehibe isaky ny roa taona. Ny isan'ny mpandray anjara dia nitombo tsikelikely ary tamin'ny 2017 ny isan'ny mpandray anjara voasoratra anarana dia nihoatra ny 25000, ary ireo manam-pahaizana voasoratra anarana ho an'ny Fihaonambe Akademika dia nahatratra 3.400.
Miasa amin'ny maha-sehatra fampisehoana teknolojia vaovao, zavamaneno vaovao ary fitaovana vaovao, ny Exposition BCEIA dia nahasarika ny fahalianana manerantany avy amin'ny manam-pahaizana, manam-pahaizana ary ny siansa sy ny teknolojia. Tao anatin'izay taona faramparany izay, maherin'ny 3.000 ny fitaovana sy fitaovana vaovao naseho sy naseho isaky ny fampiratiana tamin'ny lasa. Ny exhibitors dia mifampiresaka amin'ireo mpandray anjara mivantana amin'ny hevitra momba ny fandrosoana fitaovana, vokatra ary haitao ary vahaolana.
Ny kaonferansa akademika dia ampahany manan-danja sy tsy miova ao amin'ny BCEIA, ary natokana hampiroborobo ny teknolojia siantifika farany ambany. Ny fihaonambe izao dia misy lahateny plenary, fotoam-pivoriana 10 mifanitsy, dinika ary fivoriana ary hetsika miaraka. Ny kaonferansa dia ahitana lohahevitra marobe isan-karazany ao anatin'izany ny fifanakalozan-kevitra momba ny fitsipika, fomba ary teknolojia vaovao.
Ny kaonferansa akademika dia fanangonana miavaka an'ireo matihanina hajaina indrindra eo amin'ny sehatra. Ireo manam-pahaizana avy amin'ny oniversite sy institiota malaza eran-tany dia nanao kabary momba ny lohahevitra niadian-kevitra indrindra teo amin'ny sehatry ny famakafakana.
Ny kaonferansa dia manana laza tsara ary mitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny fifanakalozana ara-tsiansa sy ny teknolojia iraisam-pirenena ary koa ny fampivoarana ny haitao famokarana sy teknolojia famokarana fitaovana any Shina.
"Ny siansa an-tsoratra mamorona ho avy", mankanesa aminay amin'ny fihaonambe akademia BCEIA ho avy ary mahazo aingam-panahy!
Fotoana fandefasana: Feb-04-2021